ဥရောပဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက် ဆွေးနွေးပွဲကို ၁၂:၄၅ (MT အချိန်) တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာEUR/USD ယူရိုငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကို အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်.ထို့ပြင် ၁၅:၃၀ (MT အချိန်)တွင်လဲ ဥရောပ၏ဗဟိုဘဏ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်. ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲ Mario Draghi ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုဖြေလျှော့ပေး မပေးဆိုတာကို အရိပ်အမြွက်သိရဖို့ အတွက် ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရောင်းအ၀ယ်သမားများကစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. Mario Draghi ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တိုင်းယူရိုငွေကြေးသည်များစွာလှုပ်ခတ်လေ့ရှိပါသည်. အမြတ်ငွေရအောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.
ဥရောပဗဟိုဘဏဏ်ဆွေးနွေးပွဲ၌ ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကို ဖြေလျော့ပေးဖို့ အတွက်ယူရိုဇုန်နိုင်ငံများ၏စီးပွားရေး ကောင်းမွန်တငြိမ်ရန်အချိန်ပေးရဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လောလောဆယ် ပေါ်လစီတွေကိုမပြောင်းလဲဘဲထားဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.